खुसिको खबर ! धोनीको चेन्नईबाट सन्दिप लामिछानेले आईपिएल खेल्ने संम्भावना !
काठमाडौं : इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट (आईपीएल) सुरु हुन केहि दिन मात्र बाँकी रहदा धमाधम बिदेशी खेलाडीहरुले नाम फिर्ता लिईरहेका छन् । चेन्नईले आईपीएल अक्सनमा दुई
करोड रुयैयाँमा खरिद गरेको अष्ट्रेलियन फा’स्ट बलर जोस हेजलवुडले पनि पारिवारिक कारण देखाउदै आईपिएल नखेल्ने घो’षणा गरिसकेका छन् । महेन्द्रसिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नईबाट हेजलवुडले गतवर्ष तीन खेल खेलेका थिए ।
हेजलवुड आईपीएलबाट फिर्ता लिने तेस्रो अष्ट्रेलियाली खेलाडी बनेका छन्। यसअघि आरसीबीका जोश फिलिप र सनरा’इजर्स हैदराबादको मिचेल मार्शले नाम फिर्ता लिएका थिए। चेन्नईले हेजलवुडको स्थानमा कुनै खेलाडीलाई पनि भित्र्याएको छैन। चेन्नईले उनको स्थानमा विदेशी बलर भि¥त्र्याउने सम्भावना रहेको छ।
यस्तोमा उसले नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछानेलाई भि¥त्र्याउने चर्चा चल्न थालेको छ । आईपीएल २०२१ को भारतको चेन्नाईमा जारी मिनी अक्सनमा नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने अनसोल्ड भएका छन्।
४० लाख भारु बेस प्राइस राखेका सन्दिपलाई लिन कुनै पनि टिमले इच्छा नदेखाएका हुन्। २०१८ मा पहिलो पटक आईपीएल खेल्न छनोट भएका सन्दिपलाई २० लाख भारतीय रुपैयाँमा दिल्ली क्या’पिटलले भि¥त्र्याएको थियो। ३ सिजन दिल्लीमा बिताएपछि उनलाई दिल्लीको यो सिजन रिलिज गरेको थियो।
आईपीएलको युएईमा सम्पन्न पछिल्लो सिजन सन्दिपले कुनै पनि खेलमा अन्तिम-११ मा मौका पाएका थिएनन्। त्यस अघि सन्दीपले आईपीएलमा रोयल्स च्यालेन्जर्स बैंग्लोरवि’रुद्ध सन् २०१८ मा डेब्यू गरेका गरेका थिए। उनले डेब्यू खेलमा चार ओभर बलिङ गरी २५ रन खर्चेर एक विकेट लिएका थिए।
पहिलो २ सिजनमा ८ खेल खेल्दा नेपाली स्पिनरले १३ विकेट आफ्नो नाम गरेका थिए। चेन्नाईसँग लुंगी एनगिडी, शार्दुल ठाकुर र दीपक चहर लगातका स्टार फास्ट बलरहरु रहेका छन् । त्यस्तै इमरान ताहिर र करण शर्मा मुख्य स्पिनर भएपनि त्यति लयमा रहेका छैनन्।
यस्तो अवस्थानमा स्पिन बलियो बनाउन चेन्नाईले नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई हैजलउडको रिप्लेसको रुपमा भित्र्याउने सम्भावना पनि रहेको छ। अघिल्लो सिजनमा दिल्लीबाट सन्दिपले एउटा पनि खेल खेल्न पाएनन् त्यस्तै इमरान ताहिरले पनि चेन्नाईबाट तीन खेलमा मात्र मौका पाएका थिए। जसमा उनले एक विकेट मात्र हात पारेका थिए।
करणले पनि अछिल्लो खेलमा ५ खेलमा ५ विकेट लिएका थिए। जसको फलस्वरुप चेन्नाईले गतबर्ष निकै खराब प्रदर्शन गरेको थियो । चेन्नई सुपर किंग्स : महेन्द्रसिंह धोनी (कप्तान), अम्बाती रायडु, सी हरि नि’शान्थ, चेतेश्वर पुजारा,
दीपक चाहर, ड्वा’यन ब्रा’भो, फाफ डु प्ले’सिस, एम हरिशंकर रेड्डी, इमरान ताहिर, जश ह्या’जलउड, के भगथ बर्मा, के गौथम, कर्ण शर्मा, केएम आसिफ, लु’ङ्गी एन’गिडी, मिचेल सान्ट’नर, मोइन अली, नारायण जग’दिशन, आर साइ किशोर, रविन्द्र जडेजा, रोबिन उथप्पा, रुतुराज गाइ’कवाड, साम कुर्रान, शार्दुल ठाकुर र सुरेश रैना। -ताजा खबर टिभि
२०७७ चैत्र २२, आईतवार ११:५६ गते 1 Minute 1555 Views
बधाई ! ओमानमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित ।
बधाई ! पहिलोपटक विश्वकप खेल्ने बाटोमा महिला टोली ।